Khawuleza! Sihambela kwisityalo esitsha!
Bahlobo abathandekayo, ekuseni nonke! Namhlanje nge-8 kaJuni, i-2017, sikwanembeko kakhulu ukuma apha, sibambe umsitho wokuvula we-Enuo mold Co., Ltd., kwaye singqina umzuzu ongalibalekiyo wokutyhilwa kwenkampani. Enkosi ngokuthatha inxaxheba kwamaqabane e-Enuo Mold, enkosi ngenkxaso ... FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
Wowu! ikhefu elihle elunxwemeni!
-Iholide yokuya elunxwemeni lwe-Dapeng Othandekayo amaqabane e-Enuo: Ngalo lonke ixesha lokutshintsha kwexesha, kuyaziwa ukuba ixesha liyadlula. Ngaphandle kokuqonda, uAgasti uya kuguqulwa kwikhalenda ka-2018. Ihlobo ligqithile, kwaye ukwindla kuyeza. Kuwo onke amaqabane e-Enuo sokubumba, i-8 edlulileyo ... FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
-Uhambo oluya eNankunshan Hot Spring Health Valley Kuyanetha iintsuku kwaye andazi ukuba intwasahlobo idlulile. Xa imozulu intle, ndiyaqonda ukuba ihlobo sele lifikile ixesha elide. Ixesha lihlala likwipasile yethu engaqondwanga, ikhalenda ka-2019 iguqulwe ngoJuni, kwaye ... FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
Namhlanje lusuku oluhlekisayo!
-Uhambo oluya e-Songshan Lake ngo-Epreli lumelwe ukuba lixesha lothando. Indibano kwindawo apho ipesika ityatyamba khona lihlazo kuninzi lwabantu entliziyweni. Nangona kunjalo, njengombumbi, kuye kufuneke sibeke phantsi okwethutyana imibongo yentliziyo yokuhanjiswa kweprojekthi kunye ... FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
UMSEBENZI WAMVA KWAKHONA